त्रिभुवन विश्वविद्याल सेवा आयोगको मनपरी तन्त्र र गलत निर्णय – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
त्रिभुवन विश्वविद्याल सेवा आयोगको मनपरी तन्त्र र गलत निर्णय
लेखक : रिर्पोट : तिल कुमारी शर्मा
२८ कात्तिक, पर्वत । जे मन लाग्यो तेहि गर्ने हाम्रो जस्तो विश्वविद्यालय र नियम कुनै बिश्वमा छैन । अहिले कतिको सेवा आयोगको लिखित परिक्षा रद्द गर्नुपर्ने कारण नहुदा पनि गर्ने देख्दा गोबर नै भरिए र श्राप परेको देश जस्तो नेपाल लाग्न
कति दार्शनिक नै नजन्मेको देश र बिश्वबिद्धालय रहेछ नेपाल मा ? घुस खाने र राजनितीको नजिक मा जागिर पक्का गर्ने छन, कोहि अपवित्र बनाएर जागिर खुवाएका चेलिहरु जिउदै छन । तिनलाई राम्रो र सफल मान्ने ?
सामान्य उनिहरुको ठेगाना लेख्दा रद्द ? त्यो हेरेर कपिमा रद्व गर्न मिल्दै मिल्दैन । किन दिमाख मा गोवर पस्यो नेपाल का उच्च स्तर भनाउदा पागलहरु लाई ?
लेखे नलेखेको कापि पो हो हेर्ने ? नाम नम्बरको कुरा नै आउदैन चाहे लेखुन अथवा नलेखुन ? कसैले लेख्लान नजानेर कसैले नलेख्लान ? हेर्ने कपिको उत्तर हो । किन खुस्के आजकल उच्च स्तर भनाउदाका घुस खाने केही शारीरिक सम्बन्ध चाहने पशुहरु ? तिनै जङलि जनावर झै मिसिएर यस्तो नियम बनाएका छन कि क्या हो ? मैले सुनेको कतिपय हाम्रा दिदीबहिनीलाई घुम्न जाउ भन्ने अनि मन पराए भनेर बिबाहित नजिकिएको खबर सुनेकी थिए विश्वविद्यालय मा खै ति अस्लिल जागिर नै रद्व नभएर बसेका छन अहिलेसम्म ।
नाम र नम्बर लेख्दा रद्व गर्न पर्दैन, कसैले चिनेर लेख्या छैन । लेख्ने थहा नपाएर लेख्दा गल्ति भन्न मिल्दैन । ती कापीहरु फेरी जाच्न पर्छ यो नियम छिटो खारेज गरि कापी चेकर जाच गरोस र विश्वविद्यालय ननिदाओस । नियम नभाको अहिले नियम के हो यस्तो ? यस्तो नियम बनाउने पनि हैन । नलेख ठेगाना नम्बर भन्ने हो लेखिहाले नि रद्व गर्न गर्न मिल्दैन । जाचको बेला परिक्षाको डरले के लेख्ने त भन्ने भएर हत्तोत्साही हुन्छन झुक्किएर लेख्न सक्छन चिन्नचिनाउन होइन , तेसैले रद्द गराउन कदापी हुदैन ।
यो गलत निर्णयको बिरोध गर्नु पर्छ । यो गलत निर्णय हो र ति कपि तुरुन्त जाच हुनुपर्छ । हो चिनेर चिनिन गरे पो उनीहरुको दोस नत्र नम्बर आउने उत्तर मा हो ठेगानाम होइन । जाच हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय ले गलत र सत्य छुट्याउन सकेको छैन आज सम्म ।